नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल भन्छन्, - ‘अहिले इन्धनको मूल्य घटे पनि जनताले राहत पाउँदैनन्’ - नेपाली आवाज नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल भन्छन्, - ‘अहिले इन्धनको मूल्य घटे पनि जनताले राहत पाउँदैनन्’ - नेपाली आवाज
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घट्दासमेत नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटेपछि नेपाल आयल निगम निर्मम भएको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू लगाउँछन् ।
तर, नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल भने इन्धनको मूल्य घटबढले समग्र देशको अर्थव्यवस्था प्रभावित हुने भएकाले हचुवाको भरमा निर्णय नगर्ने बताउँछन् । सरकारी संस्थान वा कम्पनीले नाफा कमाउनै हुन्न भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘जनताको करबाट चल्ने संस्था जति बलियो बन्छ जनता उति नै बलिया हुने हुन् ।’
तत्काल इन्धनको मूल्य घट्ने संकेत नरहेको बताउँदै उनले यदि अहिले इन्धनको मूल्य घटाउने हो भने निम्नवर्गीय उपभोक्ताले राहत नपाउने दाबी गर्छन् ।
डुबेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टलाई उकासेर प्रशंसा बटुलेका सुरेन्द्र कुमार पौडेल डेढ वर्षदेखि आयल निगमको नेतृत्वमा छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरेन्द्र पौडेल जनताले गर्व गर्ने आयल निगम बनाउन कुर्सीमा बसेको हो, त्यो गर्छ ।’
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-
यसको मतलब इन्धनको मूल्य घट्दैन ?
इन्धनको मूल्य स्वाट्टै घटाउँदा केही दिन हिरो होइन्छ होला वा जनताले मलाई वाहवाही गर्लान् । तर, त्यसले खासमा जनताले राहत पाउँछन् भन्नेमा म आश्वस्त छैन । अहिले बजारमा भएका सबै प्रकारका इन्धनको माग र खपत अध्ययन गर्दा मध्यम र निम्न आय भएका वर्गका उपभोक्ताले इन्धन किनेको देखिँदैन । त्यो वर्गको खपत अत्यन्तै कम छ, लकडाउनले उनीहरू थुनिएका छन् ।
अहिले घटाउने मूल्यले ढुवानी, सार्वजनिक यातायात वा कलकारखानाको उत्पादन वा ठूला आयोजनाको लागत घट्ने अवस्था नै छैन । मुलुक ठप्प छ । मूल्य घटाएको फाइदा जनताले नपाउने अवस्थामा कसकालागि मूल्य घटाउनु ? यो कुरा जनताले पनि स्पष्टसँग बुझ्नु जरुरी छ । अहिले घटेको मूल्य फेरि बिस्तारै बढाउँदै जानुपर्ने हुन सक्छ । जब निगमले मूल्य बढाउन थाल्छ त्यसैमा टेकेर बजारमा अन्य वस्तु तथा सेवाको भाउ बढाउन थालिन्छ । सकेसम्म भाउलाई यहीँ स्थिर राखौं‌ भन्ने सोच हो ।
सबैभन्दा पहिले सबैजनालाई मेरो आग्रह छ, सरकारी कम्पनी वा संस्थानले नाफा कमाउनै हुन्न भन्ने मानसिकताबाट मुक्त होऔं । जनताको करबाट चल्ने संस्था जति बलियो बन्छ जनता उति नै बलिया हुने हुन् । जनतालाई दुःख पर्दा यिनै र यस्तै संस्थाले योगदान गर्न सक्ने हुन् । कसैको निहितस्वार्थका लागि कम्पनीहरू सबै घाटामा चल्नुपर्ने, नोक्सानीमै रहनु पर्ने, अस्थिरता नै हुनु पर्ने कुरामा म चाहिँ सहमत छैन । जनताप्रति उत्तरदायी संस्था पारदर्शी भए-नभएको यहाँहरू वा जनताले खबरदारी गरेर हामीलाई सच्याउन लगाउनुस् । तर, संस्थालाई बलियो बनाउने कुरामा दुईमत हुँदैन ।
निगम उच्च नाफामा हुँदा पनि मूल्य नघटाउनुको कारण कर्मचारीलाई बोनस खानलाई हो भन्ने जनगुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ?
निगमका कर्मचारीले लुटे भनेर समाचारहरू आउँदा मलाई अचम्म र दुःख लाग्छ। २०६२/०६३ सालदेखि कर्मचारीले बोनस खान पाएका छैनन्। जतिनै कमाए पनि जम्मा एक प्रतिशत बोनस पाउने हो । म सुरेन्द्र पौडेलले एक वर्षको बोनस खायो भने जम्मा ७५ हजार पाउनेरहेछ । अब सबैले बुझ्नुस् तलका कर्मचारीले कति पाउलान् ? त्यो पनि अहिले त कानुनी उल्झनले निगमले बोनस बाँड्नै पाउँदैन । तर, तथ्य नबुझी हल्का टिप्पणी हुँदा काम गर्ने मनोबल गिर्छ । सुरेन्द्र पौडेल जनताले गर्व गर्ने आयल निगम बनाउन कुर्सीमा बसेको हो, त्यो गर्छ।
दिल्ली सरकारले पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य समान बनाएको छ । अन्य मुलुकमा पनि राज्यको संकट टार्न अब संस्थान वा अन्य सरकारी निकाय लागेका छन् । सरकारले निर्णय गरेर घटाऊ भन्छ भने मलाई कुनै समस्या छैन । म अहिल्यै घटाउने निर्णय बोर्डमा पठाउँछु । तर, समग्र परिस्थिति अहिले मूल्य घटाउने किसिमको छैन र तत्काल बढ्दैन पनि । त्यसमाथि अहिले त महामारीका कारण कारोबारमा ठूलो गिरावट छ ।
अहिले राजस्व संकलन घट्दै गएको छ । निगमको दैनिक पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार चाहिँ कस्तो छ ?
गत वर्षको बिक्री हेर्दा महिनाको २४ दिनको बिक्रीबाट भ्याटबाहेक निगमले दैनिक ८७ करोडको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेको थियो । यो औसत हो। वैशाख महिनाको २० दिनको कारोबार हेर्दा प्रतिदिन जम्मा २३ करोडको कारोबार छ । निगमको कारोबार प्रतिदिन ६४ करोडले घटेको छ ।
इन्धन खपत र आयात पनि घट्दा एक हिसाबले व्यापार घाटा घट्ने र संकटको बेला राष्ट्रिय ढुकुटीमा बचत भएको पनि देखिन्छ । तर, निगमको नाफा र कारोबारको हिसाबले योराम्रो होइन । अर्कोतर्फ राजस्वमा पनि असर परेको छ । जनवरीमा छ अर्ब दुई करोड, फेब्रुअरीमा पाँच अर्ब ९० करोड, मार्चमा पाँच अर्ब ७८ करोड, अप्रिलमा एक अर्ब ७२ करोड राजस्व राज्यले गुमाएको छ । पेट्रोलियमको आयात घट्दा राज्यले एक महिनामा चार अर्ब २८ करोड राजस्व गुमाएको छ । मानौं छ महिना यसरी गयो भने २५ अर्ब हाराहारी भन्सारबिन्दुमै राजस्व राज्यले गुमाउँछ ।
पहिलो त हामीले किन्ने ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक भएकै होइन यसमा उपभोक्ताले पहिले बुझ्नुपर्छ । हामीले किन्ने तेल २० डलरसम्म झर्‍यो र अहिले फेरि उकालो लागेर ३० हाराहारी पुगेको छ । यो अझ बढ्दो क्रममा छ । अर्कोतर्फ हामीले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग लिने तेलको भाउ भनेको महिनाभरिको घटेको र बढेको औसतबाट हो । यो प्रक्रिया पहिल्यैदेखि रहिआएको सबैलाई थाहै छ ।
दुई महिनाअघि घटेको तेलको मूल्यको फाइदा बल्ल निगमले लिँदैछ । विश्व बजारको तेलको मूल्यले भन्दा पनि भारतले विश्व बजारबाट किन्ने मूल्यले नेपालको तेलको मूल्यमा भूमिका खेल्छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटबढ हुँदा हाम्रो सरकारी महसुल बढ्ने घट्ने किसिमको होइन। इन्धनमा लाग्ने सरकारी महसुल निश्चित छ । जस्तो- पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ, त्यसमा निगमको किनेको मूल्य जोडिँदा निगमको परल मूल्य नै ६३ रुपैयाँ हाराहारी प्रतिलिटर पुग्छ।
बिक्री मूल्य ८६ रुपैयाँ पेट्रोलमा हुँदा निगमलाई नाफा अहिले २२/३३ रुपैयाँ हो । हाम्रो त अहिले बिक्री नै छैन । यस्तो अवस्थामा निगमले के कमाउँछ ? कागजी नाफालाई देखाएर निगममाथि आक्षेप लगाउनुको अर्थ मैले देख्दिनँ । तेलको भाउ बिस्तारै बढ्दै छ । हाम्रो नियमित तरिकाको खपतअनुसार आयातका लागि अझै ६ महिना लाग्न सक्छ ।
कम्तीमा त्यो अवस्थासम्म बढेको मूल्यमा नबढ्ने गरी निगमले गृहकार्य गरेको छ र गर्दैछ । मलाई अहिले मुख्य चिन्ता पनि आमउपभोक्तालाई यो कुरा कसरी बुझाउने र संकटमा सरकारलाई निगमले कसरी सघाउन सक्छ भन्ने नै हो ।
कोरोना कोषमा निगमको पैसा पठाउने कुरा मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, यो कुरा सत्य हो ?
निगमलाई अहिले केही नाफा भएको छ भने राज्यको त्यो घाटा यहाँबाट पूर्ति गरौँ भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूले सार्वजनिक रुपमै भन्नु भएको छ। सम्भवतः त्यो निर्णय हुन सक्छ ।
यस्तै, निर्णय अहिले भारतमा पनि भएको छ । पैसा राजस्वमा उठाए पनि वा निगमले कमाए पनि राज्यकै हो । उसले चाहेको बेला लैजानलाई कुनैसमस्या छैन । मन्त्रीज्यूले नै सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको कुरा सायद नीतिगत रुपमा छलफल भएरै भन्नुभएको हुनुपर्छ । निगमको तर्फबाट हामीले ५० करोड सहयोग गरिसकेका छौँ । सरकारले लिने राजस्वबाहेक सामान्य अवस्थाको कारोबारमा निगम फर्कियो भने जनवरीकै बिक्री हिसाबले अहिलेकै मूल्यमा हामीले दैनिक १० करोड रुपैयाँ कोरोना कोषलाई दिन सक्छौँ।
नियमितबाहेक अन्य अरू केमा काम गर्दैछ निगम अहिले ?
बाहिर निगम नियमनको कुरा जति गरे पनि निगम पारदर्शी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण यहाँको प्रणाली रहेछ । सबै प्रक्रिया अझै पनि परम्परागत हुँदा निगमभित्रको अपारदर्शिता हटाउनै सकिएन। बाहिर धेरै हल्ला चल्नुमा यही कुरा जिम्मेवार हो जस्तो लाग्छ।
अबको मुख्य चुनौती भनेको म्यानुअल निगमलाई परिवर्तन गरेर विश्वस्तरीय प्रविधियुक्त अटोमेसनमा लैजानु हो । कागजी ढड्डा हेरेर होइन, माउस र किबोर्डका भारमा चल्ने उच्च प्रविधि सुसज्जित तथा इन्धन भण्डारणसहितको निगम बनाउन काम गर्दैछौँ । ठोस प्रगति भन्नेबेला आएको छैन ।
साभार : अनलाइनखबर बाट